The Voice of a Seagull 海鸥之声: MISS ZIMBABWE 2011
Hip Hop artist Stunner poses for photos with outgoing Miss Tourism Zimbabwe, Samantha Tshuma (in white) and some of the contestants for Miss Zimbabwe 2011 at the sashing ceremony.
Miss Zimbabwe 2011 contestants received their sashes on Friday January 28.
They are in camp for two weeks before the pageant's final.
The finalists for Miss Zimbabwe 2011 are expected to go into camp on February 1 to begin preparations for this year’s edition of the national pageant scheduled to take place later on that month. This year, the winner will get the title Miss Zimbabwe and not Miss Tourism Zimbabwe as in the last few years.
The Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) has released the names of the finalists except for five extra girls who will be chosen from H-Metro’s Friday girls in a new twist announced this week that sees the Harare based tabloid partnering with the ZTA as the official media partner for Miss Zimbabwe.
Courtesy of bulawayo24.com & www.zimbojam.com
Labels: MISS ZIMBABWE 2011